musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Batsira Unodikanwa kuUnited Airlines: Vakadzivirirwa Chete!
Airlines • avhiyesheni • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Interviews • nhau • ushanyi • kutakura • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
United Airlines Vaccinations Zvinodiwa
United Airlines yazivisa nhasi kuti zvinoda kuti vashandi vawane majekiseni eCOVID-19 pasati papfuura Gumiguru 25, 2021, kana vangangodaro vari panjodzi yekumiswa.
United inova imwe yetambo yemakambani munguva pfupi yapfuura ichiisa mvumo yekuti vashandi vavo vanofanirwa kubaiwa jekiseni vachipesana neCOVID-19.
Izvi zviri pamutemo here? Mushandi anogona here kudzingwa basa nekuramba kuita?
Pane here musiyano pakati pendege maringe nechitoro maringe nemamwe marudzi emamiriro ezvinhu emabasa?
Keith Wilkes, anoshanda pamwe neanoshanda naye / mugozanisi pakambani yemitemo yenyika yeHall Estill, anga achifona kubva kumakambani ari kuyedza kuwana mhinduro dzemibvunzo yepamutemo nezvekuti United kana kwete, kana chero kambani yechinhu ichi, inogona kuraira majekiseni vashandi.
Wilkes anopindura mimwe mibvunzo yakakosha yezvinoita kuti kuzivisa kweUnited kuve kwakasiyana nemamwe makambani akatora matanho akafanana svondo rino.
“United Airlines yazivisa nhasi kuti yave kupinda pachikwata chiri kukura chemakambani ari kuudza vashandi vawo kuti vatore kubaiwa nhomba ye COVID-19 kana kurasikirwa nemabasa avo. Chiziviso cheUnited chinoratidzira yekutanga ndege huru yekuUS kuita basa rakadai kuvashandi vayo zviuru makumi masere, avo vachazowana kupera kwaGumiguru kupa humbowo hwekubaiwa kana, kunze kwezvishoma, kupedzisa kumeso, ”akadaro Wilkes.
Hezvino zvimwe zveizvo Wilkes aifanira kugovana mubvunzurudzo:
Mubvunzo: Humwe hwakakura husiri hutano hwekupa vashandirwi, senge Google neFacebook, vakazivisa zvakafanana vhiki rino. Chii, kana paine chero chinhu, chakakosha nezveUnited kujoina chikamu chekuraira majekiseni evashandi vayo?
Wilkes: Kunze kwekuve wekutanga muindasitiri iyo mamirioni avanhu nemakambani muUS anovimba nezuva rega rega, vashandi veUnited-kusiyana nemakambani eetekiniki nemabhangi - ane vakawanda vashandi vevashandi. Kuburikidza nezvibvumirano zvekudyidzana pamwe nemitemo yemubatanidzwa, nhengo dzemubatanidzwa kazhinji dzinozviwana dzichiwana dziviriro huru pamitemo mitsva inoiswa nevashandirwi vavo iyo inogona kukanganisa kana vashandi vachichengeta mabasa avo.
Mubvunzo: United ingakwanise sei kumisikidza iyo nyowani yekudzivirira mushonga kune avo vanobatana?